Zenkit: Jikwaa Ihe aga-eme gafee Otu, Ngwaọrụ na Companlọ ọrụ | Martech Zone
Zenkit: Jikwaa oru gafee Otu, Ngwaọrụ na Ulo oru
Monday, March 16, 2020 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Ebe ọ bụ na emechiri Wunderlist ka ọ bụrụ nke gọọmentị, ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ngwa ngwa ọzọ. Puku kwuru puku ekwuola mmechuihu ha na usoro ndị ọzọ dị ugbu a, ọ bụ ya mere Zenkit ji kpebie ịzụlite Zenkit Iji Mee ya mere ndị na-eji Wunderlist nwere ike ịnwe ụlọ. Ọ bụ ihe ijuanya na ngwa ha na njirimara na nghọta kensinammuo yiri Wunderlist.
Taa ngwa ọdịnala na-ma dị mfe anatara (dị ka Wunderlist, Todoist, ma ọ bụ MS Ime) ma ọ bụ mgbagwoju oru ngo management ngwaọrụ na otutu echiche (dị ka Adaba or JIRA). Otú ọ dị, eziokwu bụ na ụdị ọrụ dị iche iche chọrọ ụdị ngwaọrụ dị iche iche. Kedu otu otu ngwa ga-esi eme ya niile?
Zenkit na-ebupụta Zenkit Iji Mee, ngwa njikwa ọrụ ọhụụ ha, tupu Wunderlist akwụsị na 6th nke Mee, 2020.
Ihe omume Zenkit na Zenkit jikọrọ:
Ejiri ngwa Zenkit (dị mfe) ime ihe zuru ezu na usoro izizi Zenkit. Yabụ site ugbu a gaa n'ihu, ịnwere ike ịrụ ọrụ na ọrụ gị na ngwa a ga-eme ma ọ bụ jiri echiche dị egwu dị ka chaatị Kanban na Gantt. Enweghị mmekọrịta, enweghị mbubata, enweghị nsogbu! Ngwa niile ahụ kekọrịta otu ụlọ ahịa data. Nke a nwere ike mee ka ndị mmadụ si ọkwa dị iche iche ọnụ, ndị njikwa na nyocha ha maka ndị otu na ọrụ ha nwere ike ime.
Akụkụ nke Zenkit na Zenkit Plus gụnyere:
Ndepụta ọrụ - Lelee ihe omume ka ha na-eme. Hụ ihe niile na-eme n'òtù gị, ịnakọta, na ọbụna ihe ndị mmadụ n'otu n'otu.
Ọchịchị dị elu - Jiri SSO nke dabeere na SAML, jikwaa ndị ọrụ na ịnye ihe, ma nyochaa ma nyochaa ọrụ ndị ọrụ yana Nhazi.
Mkpokọta - Lee mkpokọta nke ubi ọ bụla na echiche ọ bụla maka nyocha ngwa ngwa nke data gị.
Nye ọrụ - Kenyefe ndị ọrụ dị mfe site na ikenye ha ndị otu gị. Gwa ha ozugbo ọrụ ọhụrụ chọrọ nlebara anya ha.
Ihe Omume - Tinye, wepu, ma ọ bụ dochie uru nke ọ bụla n'ọhịa na otutu ihe. Enwela mgbe ọ bụla ị ga-arapara na ntinye data dị egwu!
Mmekọrịta kalenda - Agaghị agbaghara oge ọzọ! Mkpokọta Kalịnda Google nke Zenkit pụtara na kalenda gị na-emekọrịta mgbe niile.
Ndepụta ndebanye - Mkpa a ngwa ngwa ụzọ soro subtasks? Jiri ndepụta nlele! Sochie ọganihu anya ma kaa ihe dị ka ha mechara.
Na-arụkọ ọrụ ọnụ - Kpọọ ndị ọrụ ibe, ndị ezinụlọ, na ndị enyi ka ha rụkọta ọrụ na ọrụ gị.
Ihe na agba - Mee ka ihe gị pụta ìhè site na ịcha ha. Mgba dị iche n'etiti ọrụ na agba agba, agba agba
Comments - Soro ndị otu gị rụkọọ ọrụ na nkwupụta, ka ọrụ gị na mkparịta ụka gị wee nwee njikọ. Emehiere? Dezie okwu ka onye ọ bụla nwee ozi ziri ezi.
Omenala ndabere - Hazie Zenkit iji kwado gị na ndị otu gị. Tinye nzụlite na onyonyo nke gị na nwelite na Zenkit Plus.
Ngwa desktọpụ - Ngwa mara mma, nke na-enweghị ndọgharị maka macOS, Windows na Linux. Ihe ntinye ngwa-ngwa, mepee otutu uzo, ma noro na offline.
Dọrọ na dobe - intuitive hazie gị oru ngo na-akpali ihe tinyere ka ị na-enwe ọganihu na ikpuru na dobe.
Email na mkpokọta - Email ozi nye Zenkit ozugbo ma kenye ọrụ site na adreesị ozi-e pụrụ iche. Mepụta ihe ọhụrụ na igbe mbata gị.
favorites - Needchọrọ ụzọ iji soro ihe gafee akaụntụ gị n’otu ebe? Kaa ha dị ka ọkacha mmasị ka ị nwee ike ịnweta ha na snap.
Njikwa faịlụ - Na-arụkọ ọrụ ọnụ. Kekọrịta dọkụmentị na onyonyo na desktọpụ gị, ma ọ bụ site na ọrụ nchekwa igwe ojii kachasị amasị gị.
Iyo - Kpoo ngwa ngwa ịchọta ihe ị na-achọ iji ihe nzacha dị ike nke Zenkit. Chekwaa nzacha ndị a na-ejikarị eme ihe iji mepụta echiche ọdịnala.
Ụdị - Mepụta usoro iji akara nọmba ọ bụla ma ọ bụ ntụaka iji jikọọ, jikọta ma nyochaa data site na nchịkọta ọ bụla.
Gantt Chart - tọ oge ma soro usoro mgbagwoju anya na usoro iheomume doro anya, na lag & ndu, akara ngosi, ụzọ dị egwu, na ndị ọzọ!
Kalịnda ụwa - Ibu otutu oru? Chọrọ ụzọ iji soro ọrụ na ihe omume na mkpokọta niile? Mgbe ụfọdụ ị na-achọ ịhụ ihe niile n'otu ebe. Tinye "Kalinda m".
Ọchịchọ ụwa - Mkpa ka ị nweta ihe ngwa ngwa? Tochọrọ ịchọ site na ihe nchekwa? Nnyocha zuru ụwa ọnụ nwere ike ịchọta ihe ọ bụla na sekọnd.
Epeepe - Mpempe akwụkwọ Zenkit na-agbanwe agbanwe iji kee ihe, ekenye ihe kacha mkpa, ọganihu egwu, na ọtụtụ, ọtụtụ ihe. Hazie mbadamba Kanban gị site na ngalaba aha ọ bụla ị mepụtara.
kwuru - Mkpa ka ozugbo gwa ndị otu egwuregwu banyere ihe dị mkpa melite? Jiri mkparịta ụka mee ka ndị ọrụ ibe gị ping ma weta ndị otu dị mkpa na mkparịta ụka ahụ.
Mobile Apps -Ji Zenkit na-aga! Enweghị njikọ? Nsogbu adịghị. Zenkit maka iOS na gam akporo na-akwado ọrụ na-adịghị n'ịntanetị ma ga-emekọrịta mgbe ejikọtara gị.
Ịma Ọkwa - Ka ificationsma Ọkwa nyere aka kama ịdọpụ uche gị. Hazie amamọkwa gị iji nweta ozi ịchọrọ, oge na ebe ịchọrọ ya.
Ntughari ihe - Nwere ọrụ ị na-eme kwa izu ma ọ bụ ọnwa? Tọọ ọrụ ugboro ugboro ka ị ghara ịhapụ oge ọhụhụ.
References - Jikọọ mkpokọta iji mepụta njikọ data metụtara mmekọrịta kpamkpam nke ahụ dị mfe iji dị ka ndepụta ndepụta. Ike karịa naanị njikọ, amaokwu na-edebe data gị na mmekọrịta.
Ederede ederede bara ọgaranya - Nchịkọta ederede ederede dị mfe nke Zenkit na-enye gị ohere ịmepụta ederede mara mma iji bulie ọrụ gị. Jiri HTML, akara akara, ma ọ bụ ederede ederede iji mee ka okwu gị pụta ìhè.
Uzo mkpirisi - Tinye ngwa ngwa, kpalie ngalaba map uche, tinye aha mmado, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ụzọ mkpirisi Zenkit.
Subtasks - Tinye subtasks nwere ụbọchị ruru, ndị e kenyere ya na ndị ọzọ, n’ihe ọ bụla.
Gbanwee echiche - Kpọọ osisi Kanban gị site na akara ọ bụla na ndepụta na ahịrị. Mepụta matriks kachasị ma ọ bụ soro ọganihu site n'aka onye otu.
Ọrụ Otu - Igbe mbata maka otu gị. Otu ebe ịlele ihe niile enyere gị ma ọ bụ onye ọ bụla ị na-arụkọ ọrụ. Mepụta na-akpaghị aka ekenye ihe gị otu na-enweghị furu efu ke mgbagwoju oru ngo.
Otu Wiki - Mepụta na bipụta a mara mma, ọdịnaya-ọgaranya wiki na oge. Soro ndị otu wiki rụkọọ ọrụ n'otu oge.
Templates - Amaghị ebe ị ga-amalite? Were akwukwo site na akwukwo ndi okacha mara ma budata otu ndebiri ndi ahia anyi.
Ndepụta ndepụta - Tụgharịa ọrụ ọ bụla n'ime ndepụta ịme ihe ma gbue ọrụ gị! Kaa ihe aga-eme dị ka emere ma lelee ha ka ha gbadaa na ndepụta ahụ.
Ihe nyocha abuo abuo - Dị njikere na akaụntụ gị bụ ala na-akpata abụọ ihe Nyocha. Maka ndị ọrụ Zenkit niile.
Ọrụ Ndị Ọrụ - Kenye ndị ọrụ ọrụ iji bulie nchekwa nke ọrụ gị ma bulie arụmọrụ otu gị.
Na-arụ ọrụ na ntanetị - Jiri Zenkit na ọ laa, ma ị nwere njikọ internetntanetị ma ọ bụ na ịnweghị! A na-akwadokwa ọnọdụ na-adịghị n'ịntanetị na nsụgharị weebụ
Zapier - Jikọta ihe karịrị 750 nke ngwa na ọrụ ọkacha mmasị gị kachasị na njikọta nke Zenkit's Zapier. Akwụkwọ
Tags: Jiranjikwa ọrụime-en-ndepụtaedoziwunderlistzenkit
38 Email Marketing Mejọọ Iji Lelee Tupu ịpị Send
Ihe kpatara Weebụ Weebụ chọrọ n'okwu na 5zọ XNUMX iji bulie ya
Mee 6, 2012 na 6: 06 PM
Daalụ Douglas, abịabeghị m Wunderlist tupu ọkwa gị. Aghaghị m ịchọpụta ihe! You ga - eme ntinye ntinye na ngwa ekwentị? Ọ ga-amasị m ịmatakwu!